Sirdoonka Dawlada oo helay qorshe aan caadi aheeyn oo Al Shabaab ku dooneeysay inay ku qaarajiyaan Madaxda Dawlada ugu sareeysa. | Salaan Media
Sirdoonka Dawlada oo helay qorshe aan caadi aheeyn oo Al Shabaab ku dooneeysay inay ku qaarajiyaan Madaxda Dawlada ugu sareeysa.
Sirdoonka Dawlada Soomaaliya oo helay qorshe aan caadi aheeyn oo Al Shabaab ku dooneeysay inay ku qaarajiyaan Madaxda Dawlada ugu sareeysa.
Waxaa fashil ku dhamaaday qorshe aan caadi aheeyn oo Xarakada Al Shabaab ay in mudo ah ka soo shaqeeynaysay kaas oo ahaa sidii ay si sahlan uga taqluusi lahaayeen Madaxda ugu sareeysa Dawlada sida Taliyaasha ciidamada Booliiska & Milatariga iyo Madaxweeynaha ilaa R/wasaaraha .
Laamaha Sirdoonka Dawlada oo qarsh xoogan ku bixiyay ogaanshaha sirtaan cusub waxaa loo is ticmaalay ama xaqiijiyay rag ku jira ama mudo dheer ka tirsanaa Xarakada Al Shabaab kuwaas oo qaarkood iminka u kala fakaday gobolo iyo Degmooyin ka madaxbanaan goobaha ay Al Sbabaab ka taliso.
Sirtaan Culus ayaa waxaa lagu sheegay in Al Shabaab ay soo dirsatay Rag si aad ah u tababaran kuwaas oo laga soo dhigay inay yihiin kuwo ka soo goostay Xarakada Al Shabaab waliba ku soo biiray dhanka ciidamada Dawlada.
Ragaan ayaa waxaa loogu tala galay sida Laamaha Sirdoonka Dawlada ay xaqiijiyeen inay Qaarajiyaan Madaxda Dawlada marka ay booqanayaan xeryaha lagu tababaro ciidamada Dawlada gaar ahaan kuwa dhaqan celinta kuwaas oo intaas ka dib doonayay marka ay wax qaarajiyaan inay isla goobta isku dilaan .
Kiiskaan oo ah Isqarxintii oo Waji cusub loo badalay waxaa aad looga deeyriyay qaabka lagu kala ogaan karo Maleeshiyaadka sida saxda ah uga soo goostay Xarakada Al Shabaab iyo kuwa beenta sheegaya ee u soo goostay kaliyah inay ka taqluusaan Madaxda Dawlada marka ay Jaanis ku helaan.
Sida la wada ogyahay Madaxda Dawlada ugu sareeysa ayaa inta badan booqata xeryaha ciidamada Dawlada lagu tababaro kuwaas oo si caadi ah iskaga dhex gala ciidamada Dawlada kuwooda xeryaha ku jira.
Warar hoose oo ka soo baxaya Laamaha Sirdoonka Dawlada kuwooda ugu sareeya ayaa waxa ay xaqiijinayaan in Madaxda dawlada laga mabnuucay inay dhex galaan ama wada aaminaan xeryaha lagu tababaro Maleeshiyaadka ka soo goostay xarakada Al Shabaab kuwaas oo qaarkood wali hubkooda heeysta.
Dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay ayay eheed markii uu isku Qarxiyay afka hore ee mid ka mid ah irdaha laga galo xarunta Madaxtooyada Villa Somalia nin ka mid ahaa ragii sheegay inay Al Shabaab ka soo goosteen kaas oo degaan ahaan u dhashay ama ka yimid magaalada Wanla Weeyn.